Shiinaha oo tayo sare leh maalin walba Iftiimin baaxad leh ayaa lagu ballaariyey iibinta Warshadaha iyo Warshadda | Xinzheng
tayo sare leh oo maalinle ah Iftiimin baaxad leh ayaa la ballaariyey si loo iibiyo
Perlite aad u qurux badan oo la ballaariyey ayaa ah nooc ka mid ah qaab -dhismeed dalool leh, caddaan ah, walxo dabacsan oo ka samaysan lava vitreous acidic ah iyada oo loo marayo burburinta, kuleylinta, dubista iyo ballaarinta. Waxay leedahay awood yar, tabinta kuleylka oo hooseysa, xasilooni kiimiko oo wanaagsan, aan guban karin, aan guban karin oo aan guban karin. Sunta, urta, codka nuugta iyo sifooyin kale.
Faahfaahinta deg -degga ah ee Quruxda badan ee la ballaariyey
Horudhaca perlite oo aad u qurux badan
Perlite la ballaariyey oo qurux badan (perlite la ballaariyey oo loogu talagalay heerkulka aadka u hooseeya iyo injineernimada xoogga badan) waa badeecad la helay iyada oo la dooranayo qayb yar oo budo iyo macdan ah oo ku jira mashiinka qotoma oo leh gaaska dabiiciga ah sida ilaha kulaylka, iyo kululaynta iyo ballaarinta. Badeecadda la xoojiyay waxaa lagu buufiyaa silikoon dusha sare ee perlite la ballaariyay, Samaynta qaabdhismeedka biyaha. Midabka, cufnaanta guud iyo tilmaamaha sheyga ayaa la mid ah perlite -ka caadiga ah ee la ballaariyey. Badeecaddan waxaa inta badan loo adeegsadaa dhismaha lakabka dahaarka injineernimada kuleylka ee heerkulka aadka u hooseeya, sida qeybta wax soo saarka oksijiinta, gaaska dabiiciga ah, hydrogen dareere, nitrogen dareere ah, baabuurta gaadiidka qaboojiyaha oksijiinta dareeraha leh iyo maraakiibta. Badeecadani waxay leedahay waxqabadka dahaarka heerkulka aadka u hooseeya.
Tilmaamayaasha farsamo ee perlite ee aadka u ballaadhan
Maya. Shayga Cutub Waxqabadka
Nooca SP-50 Nooca SP-60
1 Cufnaanta guud Kg/m3 35～50 45～60
2 Taabo cufnaanta Kg/m3 45～60 55～70
3 Cabbirka walxaha (saamiga wt%) Heerka socodka 1.2mm % 1.2mm — 0.154mm ≥90% 1.2mm — 0.154mm ≥90%
0.154mm heerka socodka % 0.154mm ugu badnaan 10% 0.154mm ugu badnaan 10%
4 Qoyaanka guud ee qoyaanka (wt% ratio) % ≤0.5 ≤0.5～1
5 Xagasha deji (marka dhererka dhererkiisu yahay 100mm) 0 33～37
6 Kordhinta cufnaanta inta lagu jiro buuxinta Buugga % ≤25
Dabayl % ≤35
7 Dhaqdhaqaaqa kuleylku waa (qiimaha celceliska heerkulka hawada at 77K --- 310K) w/(mk) 0.022～0.025 0.024～0.026
8 Heerkulka hawlgalka ℃ -200～800
Xusuusin: Cufnaanta guud ee miiska, cufnaanta qasabadu waa qiimaha ugu sarreeya.
Hore: qiimaha ugu fiican alaab -qeybiyeyaasha budada gargaarka shaandhaynta ee Shiinaha
u iibso Beeraha Beeraha badan ee ganacsiga g ...
Guddiga ningax dhoobada Dabka for Wood Sto ...
8-16mm ceramicite dhoobada dhirta
Cuntada Zeolite ee Xoolaha lagu daro Darajada Powder ee ...
qiimaha ugu fiican ee alaab -qeybiyeyaasha budada gargaarka shaandhaynta ...